December 16, 2020 – Newsharpal24
विवाहकै दिन दुर्घटना, बेहुलाले गम्भिर अवस्थाकी बेहुलीलाई बेडमै लगाइदिए सिन्दुर।
December 16, 2020 adminLeaveaComment on विवाहकै दिन दुर्घटना, बेहुलाले गम्भिर अवस्थाकी बेहुलीलाई बेडमै लगाइदिए सिन्दुर।
एजेन्सी । तपाइले हिन्दी फिल्म हेर्ने गर्नुभएको छ भने २००६ मा, सूरज बड़जात्याले बनाएको फिल्म विवाह को बारेमा थाहा छ होला । जसमा दुलही बनेकी अमृता राव आफ्नो बहिनी नाता पर्नेलाई बचाउन आगोमा जल्छिन् । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि बेहुला बनेका शाहिद कपूरले उनीसँग विवाह गरे। यो रिलको जीवनको तस्विर हो जुन पनि ठूलो हिट […]
हाम्रो झण्डा, हाम्रो शान !तेस्रो राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइयो, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
December 16, 2020 adminLeaveaComment on हाम्रो झण्डा, हाम्रो शान !तेस्रो राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइयो, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
आज पुष १ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी तेस्रो राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको छ । राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालले माइतीघर मण्डलामा कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाएको हो । प्रतिष्ठानले २०७५ पुष १ गते देखि यो दिवस मनाउँदै आएको छ । २०१९ पुष एक गतेको दिन नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई संयुक्त राष्ट्र संघमा अंगीकृत गरिएको थियो । सोही […]
नेपालमा पनि टिकटक बन्द हुने सभावना ! उजुरी दिनेको संख्या अत्याधिक बढे,
December 16, 2020 adminLeaveaComment on नेपालमा पनि टिकटक बन्द हुने सभावना ! उजुरी दिनेको संख्या अत्याधिक बढे,
नेपालमा भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटक (सामाजिक सञ्जाल) का प्रयोगकर्ता बढेसँगै यसको दुरूपयोग पनि बाक्लिएको पाइएको छ। रमाइलो गर्ने र भाइरल हुने बहानामा केही व्यक्तिले जथाभाबी भिडियो बनाएर ‘अपलोड’ गर्दा व्यक्तिगत र संगठनात्मक गोपनीयता उदांगो भइरहेको प्रहरीको ठहर छ।नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार कार्यालयभित्रै भिडियो बनाउने, बैंकका कर्मचारीले फाइल, पैसा र डकुमेन्टजस्ता सामग्री भिडियोमार्फत सार्वजनिक गर्ने, […]